Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Abwaan Sangub. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Abwaan Sangub.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Abwaan Sangub.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u tacsiyeeyay qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise (Sangub) oo maanta ku geeriyoodey magaalada Addis Ababa.
“Innaa Lilaahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun. Waxaan murugada iyo tiiraanyada la qaybsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Marxuum Maxamuud Cabdullaahi Ciise (Sangub) oo ku geeriyooday magaalada Addis Ababa.”
“Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise waxa uu ahaa abwaan iyo jilaa Soomaaliyeed oo qayb libaax ka qaatay koboca fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Abwaanku waxa uu sidoo kale noqday askari ka tirsan Ciidanka Xoogga oo naftiisa u huray difaaca qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya.
Abwaan Sangub waxa lagu xasuustaa ruwaayadihii iyo heesihii waddaniga ahaa ee uu sameeyay kuwaas oo uu ku wacyigelin jiray shacabka Soomaaliyeed.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa Eebbe uga baryay Marxuumka inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, qoyskiisa iyo dhammaan qaranka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodeyna samir iyo iimaan ka siiyo.
Previous articleXog: Kenya oo ka cabanaysa Wadamo kala saftay Somalia
Next articleSomaliland authorities indefinitely shut down two privately owned TV Stations in Hargeisa
Sarkaal ka tirsanaa ilaalada Madaxtooyada oo la xaqiijiyey inuu ku dhintay weerarkii SYL
Khadiija Diiriye “doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto, waan ka fiirsaneynaa sidii guddiga doorashada….”
DF oo shaacisay dad cusub oo loo xiray qaraxii gobolka iyo...
Agaasimaha Guud ee Hey’adda Socdaalka oo hortagay Baarlamaanka, kana jawaabay su’aalo…
xogdoonnews - December 11, 2019